Danjire kuxigeenka Safaarada Maraykanka Ee Dalka Itoobiya Ayaa lagu Soo Dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jigjiga Ee Garaad Wiil Waal - Cakaara News
Danjire kuxigeenka Safaarada Maraykanka Ee Dalka Itoobiya Ayaa lagu Soo Dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jigjiga Ee Garaad Wiil Waal
Jigjiga (CN) Talaado, 24 Nov 2015, Wafti uu hogaaminayo danjire-kuxigeenka safaarada maraykanka ee dalka Itoobiya ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha garaad wiil waal ee magaaalada jigjiga. Waftigan ayaa waxaa garooonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay afhayeenka baarlamaanka ahna gudoomiyha XDSHSI Mudane Maxamed Rashiid Isaaq, madaxwayne-kuxigeenka ahna wasiirka Xafiiska Beeraha iyo Khayraadka Dabiiciga Marwo Sucaad Axmed Faarax, madaxa xarunta dhexe XDSHSI lehna awood madaxwayne-kuxigeen Mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi iyo masuuliyiin kale. Waxaana wahelinayay kooxaha fanka oo si diiran ugu soo dhaweeyay ciyaaraha dhaqanka deegaanka.
Nasasho yar kadib waftigii iyo Madaxdii heer deegaan ee garoonka ku soo dhawaysay ayaa usoo kicitimay dhanka xarunta madaxtooyada halkaas oo uu Madaxawaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamud Cumar si diiran ugu soo dhaweeyay waftiga uu hogaaminayay Danjire-KuXigeenka Safaarada Maraykanka Ee Dalka Itoobiya Mudane Piter Viro-man iyadoo ay ka wada hadleen arrimo door ah.
Danjire-kuxigeenka oo dareenkiisa cabiraya ayaa sheegay in uu aad uga helay xaalada guud ee deegaanka iyo sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay, gaar ahaan dhaantada iyo ciyaaraha, isagoo aad ugu riyaaqay xarunta cusub ee madaxtooyada, halkaasoo ay kulan ku qaateen waftiga iyo madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamud cumar.
Gabagabadii ayaa Danjire-kuxigeenku sheegay inay booqashooyin indho indhayn ah ku tagi doonaan qaar ka mid ah dagmooyinka Gobolka Faafan, Magaalada Goday iyo goobaha kale ee ay mashaariicda hormarineed ka wado haayada USAID iyo haayadaha ay bah wadaagta yihiin ee ka shaqeeya mashaariicaha hormarineed.